လွယ်ကူသော Walker က FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2019
ပင်မစာမျက်နှာလွယ်ကူသော Walker က FX ကို EAလွယ်ကူသော Walker က FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA 1
စျေးနှုန်း: $ 147 (1 လိုင်စင်စျေးလျှော့စျေး, အခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
မွတ္စု: အပြာရောင်သောကြာနေ့ရောင်းအား - 50% OFF - ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 297
Forex စိန် v4.0 ပြန် ...
စျေးနှုန်း: $ 174 (1 လိုင်စင်စျေးလျှော့စျေး, အခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့)
မွတ္စု: အပြာရောင်သောကြာနေ့ကြီးရောင်းဝယ်မှု - 50% OFF - …
ငွေကြေးစွမ်း: EURUSD, GBPUSD နှင့် EURGBP
မှတ်စု: ဤ Forex EA ၏ကုန်သွယ်မှုရလဒ်များသည်ရွေးချယ်ထားသော FX ပွဲစားအပေါ်အလွန်မှီခိုအားထားရပြီး (ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းမဟုတ်) သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ ရန်လိုသော ဦး ရေပြားကြောင့်ပွဲစားအားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါ။
Easy Walker Fx EA ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - တိကျမှန်ကန်သောညဉ့်နက်နှင့် Forex ကျွမ်းကျင်သူ
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA တစ်ဦးသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး နှင့် ညဥ့် Multipair ဦးရေပြားစက်ရုပ် ထိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Argolab အသင်းအဖွဲ့။ ဒါ Forex စက်ရုပ် စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါတယ်အခါအာရှ session တစ်ခုအတွင်းမှာကုန်သွယ်ရေး, ။
အဆိုပါစျေးကွက်သည်ယနေ့အမြတ်အစွန်း၏တရာများစွာကိုရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူဂုဏ်ယူစွာပစ္စုပ္ပန် backtest ရလဒ်များကိုသူတို့ထဲကအများစုဟာ, စီးပွားဖြစ် scalpers နှင့်အတူအပြည့်အဝဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရာပတျဝနျးကငျြတကယ့်ကုန်သွယ်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါလက်ထက်အကူအညီမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA ၏စာရင်းထဲတွင်သစ်တစ်ခုအခနျးမှာဖွင့်လှစ် Argolab ထုတ်ကုန်။ ၎င်းတို့၏ယခင် Forex စက်ရုပ်မတူဘဲ, ဒီ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ယင်း၏ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအတွက် martingale မသုံးပါဘူး။
ဘယ်နှစ်ယောက် scalpers သင်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြဘူး - အတည်ပြုခဲ့သည် - ပြီးခဲ့သည့်3လအတွင်းအမြတ်အစွန်း, Real-ပိုက်ဆံကုန်သွယ်သနည်း များလွန်းအနည်းငယ်, သူတို့ကိုပဲလွန်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
Easy Walker Fx EA - ဤအမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ် လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါသည်သောအခါ, အာရှ session တစ်ခုအတွင်းမှာကုန်သွယ်မှုသောညဥ့် scalper ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ၏အခြေခံဗားရှင်း Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အပေါ်အရောင်းအ EURUSD, GBPUSD နှင့် EURGBP 15 မိနစ်အချိန်ဘောင်နှင့်အတူအားလုံးအတွက်။ အဆိုပါ Forex EA ၏ တစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်အကျိုးအမြတ် ယူ. ရပ်တန့်-အရှုံးအဆင့်ဆင့်အရောင်းအဖွင့်ဖို့ (သို့သော်အများဆုံးအရောင်းအကြောင်းမတိုင်ခင်ပိတ်ထားကြသည်) သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့။
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA အထိနှင့်ညင်ညင်သာသာစျေးကွက်ယိအပေါ်အမြတ်အစွန်းရတဲ့တစ်ကုန်သွယ်မှုဝင်များအတွက်ဂရုတစိုက် optimized နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ stochastic စျေးကွက်ဆူညံသံလျှော့ချရန်နှင့်၎င်း၏အရောင်းအများအတွက်အများဆုံးအကောင်းဆုံး entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်မှတ်ရွေးဖို့ renko filter များအသုံးပြုသည်။
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကွဲပြားခြားနားသောပွဲစားများ၏အစစ်အမှန်အကောင့်ပေါ်တွင်လပေါင်းများစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ Monitor ၏အတော်ကြာဥပမာတွေ့နိုင်ပါသည်။
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA တစ်ဦး scalper သည်နှင့်အခြားများစွာသောအဘို့အဖြစ် Scalper EA’s၎င်း၏ကုန်သွယ်ရလဒ်များပွဲစားပေါ်မူတည်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယျ့ကိုယျကိုစုံစမ်းပြီသာပွဲစားများအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကျနော်တို့အရာရှိတဦးက monitor ရှိသည်သောအဘို့ပွဲစားများဖြစ်ကြသည်။ ဒီအခိုက်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအပေါ်ကျင်းပကြသည် AlpariECN, FxOpen STP နှင့် Pepperstone သင်တုန်းအကောင့်အသစ်များ၏။ သင်တို့သည်ဤပွဲစားများအပေါ်တူညီတဲ့အမျိုးအစားအကောင့်ကိုသုံးလျှင်, သင်အရာရှိတဦးက monitor နှင့်အတူကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သည်အခြားပွဲစားများနှင့်အတူအရောင်းအမတူညီတဲ့ရလိမ့်မည်။
M15 ။ တကယ်တော့ရလဒ်အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်း လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA ဒီဇယားအပေါ်ကို EA စောင့်ရှောက်ဖို့ သာ. ကောင်း၏၎င်း၏ entries တွေကိုအဘို့အများအားဖြင့် M15 အချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုသည်။
အခုအချိန်မှာ, လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA အထောက်အပံ့များ EURUSD, GBPUSD နှင့် EURGBP.
သြဇာသည်ဤ EA ၏အဘို့အရေးမထားဘူး။
သင့်ရဲ့သိုက် (အန္တရာယ် = 0.01) ၏တစ်ဦးချင်းစီ 100 $ နှုန်း 10 ၏လောတအရွယ်အစား။
ဒီကို EA တစ်ခုမှာလိုင်စင်တဦးတည်းကုန်သွယ်အကောင့်အတွက်တရားဝင်သည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်အကောင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အကောင့်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရန်အတွက်, သင်တောင်းဆိုမှုကိုနဲ့ e-mail ပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရဖြစ်ကြပါလျှင် လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EAသူတို့ကငွေပေးချေမှုနေ့မှ 30 ရက်အတွင်းသင်အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေအာမခံပါသည်။
အဆိုပါဖိုရမ် http://forumargolab.net မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကချည်မှာသင်၏မေးခွန်း post သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုမေးမြန်းပါ။
ဒီ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးမှသင်ဘာမျှော်လင့်နိုင်လဲ
မကြာခဏဖြစ်သော ပါဝင်သောအရောင်းအ EURUSD, GBPUSD နှင့် EURGBP
ဟုတ်မှန်ရေး 90% အထက်၏
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. တစ်လလျှင်တသမတ်တည်းပျှမ်းမျှပြန်ထုတ်လုပ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူနေသူများကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဤ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာသင်ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်နေကြသည်။ သင်သည်သူတို့အပြောင်းအလဲအတွက်အဆင်သင့်နှင့်အ Forex အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြသူကုန်သည်တစ်ဦးအသေးကို select လုပ်ပါအုပ်စုတစ်စုဝင်ရောက်နေကြသည်။
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 90% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
မူဝါဒအပြန်အမ်း: မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်ဤထုတ်ကုန်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတျပါလျှင်, ရောင်းချသူသင်ငွေပေးချေမှုနေ့မှ 30 ရက်အတွင်းအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေအာမခံပါသည်။
လွယ်ကူသော Walker က FX ကို EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 349 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်လွယ်ကူ Walker က FX EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Easy Walker Fx EA - တိကျမှန်ကန်သောညဉ့်နက်နှင့် Forex ကျွမ်းကျင်သူ
အကောင်းဆုံး Forex EA ၏ 2014
အကောင်းဆုံး Forex စက်ရုပ် 2014
လွယ်ကူသော Walker က FX
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့စက်တင်ဘာလ 2019
EASY WALKER FX EA - ညအချိန်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုအတွက်အမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - + 4.0% လစဉ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (အမှန်တကယ်ငွေသားစာရင်းသွင်းခြင်း!) ချစ်ခင်ရပါသော Forex ကုန်သည်၊ UPDATE! Easy Walker Fx EA ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - တိကျသောညဉ့်နက်နှင့် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်ဤအချက်အလက်များနှင့်အပိုဆုကြေးများကိုဤနေရာတွင်ရယူပါ - https://www.bestforexeas.com/easy-walker-fx-ea-review/ Easy Walker Fx EA သည်အလွန်အစွမ်းထက်သော FX ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ Argolab မှဖန်တီးသည့်အကြံပေးနှင့်ည Multipair Scalping စက်ရုပ်။ Forex Robot သည်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အာရှအစည်းအဝေးတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့စျေးကွက်သည်စီးပွားဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအများစုမှာအမြတ်ရာချီသောအမြတ်အစွန်းဖြင့်အမြစ်တွယ်နေသောရလဒ်များကိုဂုဏ်ယူစွာတင်ပြကြသည်။... ဆက္ဖတ္ရန္